ट्रैक सेल फोन ब्राउजिङ इतिहास
ExactSpy-Track Cell Phone Browsing History लग सबै वेबसाइट ठेगाना प्रयोगकर्ता फोन ब्राउजर संग भ्रमण. तपाईं कुनै कुरा हेर्नका गरिएको छ भने तिनीहरू हेर्नका हुँदैन देख्न हुनेछ!
ExactSpy तपाईं एक iPhone वा Android लक्ष्य फोनको वेब ब्राउजर देखि सबै वेब इतिहास ट्रयाक गर्न अनुमति.
भ्रमण सबै वेब साइटहरु
प्रत्येक भ्रमणको समय र मिति प्राप्त
सबै URL अनलाइन खाता गाडीको अपलोड गर्नुपर्छ; तिनीहरूलाई कुनै पनि भेट्न क्लिक
तपाईं आफ्नो छोराछोरीलाई भ्रमण छन् के वेब साइटहरूमा एक आँखा राख्नुपर्छ? कर्मचारीहरु गैर-काम सम्बन्धित साइटहरु मा समय खेर फालेका छन् भने आश्चर्य? अथवा तपाईं व्यक्तिगत डेटिङ साइटहरूमा वरिपरि चुपके छ जो एक साथी छ. ExactSpy-Track Cell Phone Browsing History के तपाईं आफ्नो लक्ष्य प्रयोगकर्ता वेब ब्राउजिङ गतिविधिमा मिति सम्म राख्न अनुमति. प्रत्येक URL आफ्नो अनलाइन गाडीको मा अपलोड हेर्नुहोस, र सीधा भ्रमण गर्न प्रत्येक URL क्लिक. त्यो ब्राउजरहरुमा टाइप सबै URLs प्रयोगकर्ताहरू ट्रयाक र त्यो के हो, हेरौं वेबसाइट मनमनै पठाउन हुनेछ अर्थ. त्यसैले तपाईं इंटरनेट गतिविधिहरु निगरानी गर्न सक्छन् (URLs) on what devices you installed Exactspy.
संग ExactSpy आवेदन, तपाईं आफ्नो बच्चाहरु या कर्मचारीहरु आफ्नो स्मार्टफोन देखि दौरा गर्दै छन् वेब साइटहरु निगरानी गर्न सक्छन्. हाम्रो सफ्टवेयर तपाईं ट्रैक गर्न चाहनुहुन्छ कि वस्तु को मोबाइल इन्टरनेट पहुँच मा कुनै पनि गतिविधि अनुगमन गर्न मदत गर्छ. र सही गर्न को लागि आफ्नो दर्शकहरु तोक्न.
अनुगमन भ्रमण वेब पृष्ठ गरेर, तपाईं माथि प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहुनेछ. तपाईं त आफ्नो बच्चाको सेल फोन आमाबाबुको नियन्त्रण आवश्यक निर्णय गर्न सक्छन्. आफ्नो कर्मचारीहरु इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ लागि पनि केवल व्यापार उद्देश्यको लागि वा कम्पनी स्मार्टफोन प्रयोग चाहे पत्ता.
ExactSpy-Track Cell Phone Browsing History स्मार्टफोन डाटा को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित. कुनै एक तर तपाईं आफ्नो निजी क्षेत्र पहुँच हुनेछ. यसबाहेक, सेल फोन अनुगमन आवेदन पूर्ण undetectable छ. निगरानी गतिविधिहरु सुझाव आवेदन को सूचीमा कुनै प्रतिमा वा दृश्य प्रस्तुति अन्य किसिमको छ. लक्ष्य उपकरणमा यो पत्ता कुनै उपाय छ.
Android उपकरण लागि:
यो निर्मित समर्थन ब्राउजरहरूमा (यो कारखाना निर्भर, उदाहरणका लागि क्रोम ब्राउजर).
आईओएस उपकरणहरू लागि:
यो मात्र सफारी ब्राउजर समर्थन.
How do i view browsing history, How to check browsing history on cell phone, How to track cell phone internet history, Internet history tracking, ट्रैक सेल फोन ब्राउजिङ इतिहास, Track internet browsing history, Tracking internet activity
← सेल फोन कुराकानी रेकर्डर अनुप्रयोग